Dịkarịa ala, mmadụ 15 nwụrụ na oke idei mmiri US northheast
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nchedo njem na Mberede » Dịkarịa ala, mmadụ 15 nwụrụ na oke idei mmiri US northheast
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ka ọ na -erule etiti ehihie, ekwenyela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwụ 20, na -akọ ọtụtụ ọnwụ na New York, New Jersey, Pennsylvania, na otu na Maryland.
Nnukwu idei mmiri bibiri US northheast.
Oké ifufe Hurricane Ida gbupụrụ ụzọ na -egbu egbu site na ugwu ọwụwa anyanwụ United States.
Ndị gọvanọ New York na New Jersey na -ekwupụta ọnọdụ mberede.
Oké mmiri ozuzo kpuchiri mpaghara metro New York City n'abalị Wenezde ruo Tọzdee, na -ebute ọtụtụ ọnwụ, ka ifufe Hurricane Ida na -egbute ụzọ na -egbu egbu gafee ugwu ọwụwa anyanwụ United States.
Gọvanọ New York Kathy Hochul kwupụtara ọnọdụ mberede n'ihi na ihe fọdụrụ na Ida kpatara nnukwu idei mmiri na New York City na akụkụ ndị ọzọ nke steeti ahụ.
Gọvanọ New Jersey Phil Murphy ekwupụtala ọnọdụ mberede na nzaghachi Ida, dịkwa ka ọ mere New York City Onye isi obodo Bill de Blasio n'isi abalị.
Ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ na -arị elu ụbọchị niile na Tọzdee ka ndị isi malitere ịghọta oke mbibi ahụ. Ka ọ na -erule etiti ehihie, ekwenyela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwụ 20, na -akọ ọtụtụ ọnwụ na New York, New Jersey, Pennsylvania, na otu na Maryland.
Mmadụ atọ n'ime ọnwụ a mere n'otu ezinụlọ New York City mpaghara Queens. Ndị ezinaụlọ atọ a, gụnyere nwata nwoke dị afọ 2, mmiri riri na mpaghara Flushing. Egburu mmadụ abụọ ọzọ na mpaghara Jamaica mgbe idei mmiri dara mgbidi ụlọ ha.
Ọnwụ anọ ọzọ mere n'otu ụlọ dị na Elizabeth, New Jersey, AP kọrọ. Onye isi obodo Elizabeth ebula ụzọ kwuo ọnwụ ise sitere na ogige ahụ.
Na mpaghara Philadelphia ka ukwuu, ọ dịkarịa ala ndị ọrụ gọọmentị enwetala ọnwụ atọ, gụnyere otu ọnwụ nke nwanyị dara osisi dara na Upper Dublin Township.
Na Rockville, Maryland, otu nwoke dị afọ 19 nwụrụ na idei mmiri na Rock Creek Woods Apartments na Twinbrook Parkway. Dị ka Fox5 si kwuo, nwoke ahụ na -achọ inyere nne ya aka mgbe eburu ya.
Enwekwara ọtụtụ ọnwụ nke ndị mmadụ n'ụgbọ ala, ọghọm dị njọ nke bụkwa ọnwụ nke opekata mpe otu onye ọkwọ ụgbọ ala na Passaic, New Jersey. Ka idei mmiri na-agbafe n'okporo ụzọ n'obodo, otu onye ọkwọ ụgbọ ala dị afọ 70 bupụrụ mgbe a napụtara ezinụlọ ya.
Ihe omume ihu igwe dị otú ahụ mere ka ụlọ ọrụ New Weather Service (NWS) New York wepụta ọkwa mberede mberede idei mmiri mbụ, ka ewepụtara otu maka ugwu New Jersey wee nyekwa nke ọzọ maka akụkụ nke New York City. Edebere anya maka ọnọdụ idei mmiri na-eyi ndụ egwu, a na-ejikwa ya maka "ọnọdụ ndị a na-adịghị ahụkebe mgbe oke oke mmiri ozuzo na-ebute oke egwu na ndụ mmadụ na mbibi dị egwu," NWS kwuru.